Ifektri kanye nabaphakeli abaphansi be-Blue Carbon Fibre UChengyang
Izindwangu zeBlue Carbon Fibre Indwangu yeHybrid yelukwa yizinhlobo ezingaphezu kwezimbili zezinto zokwakha imicu ehlukene (i-Carbon fiber, i-Aramid fiber, iFiberglass nezinye izinto ezihlanganisiwe), ezinokusebenza okuhle kwezinto ezihlanganisiwe ngamandla omthelela, ukuqina namandla okuqina.
Izindwangu zeBlue Carbon Fibre Indwangu yeHybrid yelukwa yizinhlobo ezingaphezu kwezimbili zezinto zokwakha imicu ehlukene (i-Carbon fiber, i-Aramid fiber, iFiberglass nezinye izinto eziyinhlanganisela), ezinokusebenza okuhle kwezinto ezihlanganisiwe ngamandla omthelela, ukuqina namandla okuqina.
1) High-Amandla, cishe izikhathi eziyishumi zensimbi
2) Isisindo Esilula, isilinganiso singaphansi kwe-1/5 yensimbi
3) Corrosion Ukumelana, High Ukuqina
4) I-Flat Surface, ifomu le-warp / weft denisty
5) I-Lint Shiny, i-Surface enobuqili
Izindwangu ze-Hybrid zinezicelo ezibanzi, njengobunjiniyela bezimoto, ezemidlalo zezimoto, imihlobiso esefashinini, ukwakhiwa kwezindiza, ukwakhiwa kwemikhumbi, izixhobo zemidlalo, imikhiqizo ye-elekthronikhi nezinye izinhlelo zokusebenza. Indwangu yeHybrid iyindlela entsha, esetshenziselwa kakhulu ukuhlobisa izimoto, ngokukhanyayo umbala nobuso obuhle.
Isicelo esikhulu: igobolondo lekhompyutha, umhlobiso wemoto, umhlobiso wesikebhe, okokusebenza kwezemidlalo, ezemidlalo, izikeyti ezinamasondo, isigqoko sokuzivikela, ukuhlobisa ifenisha njll.
Ukupakisha Yekuchumana: 100Meters noma amamitha 50 kwelinye ibhokisi
Delivery Yekuchumana: izinsuku 3-30 emva idiphozi
Langaphambilini I-4 × 4 Twill Carbon Fibre
Olandelayo: Izinga Lokushisa Eliphezulu le-fiberglass Cloth
I-Blue Twill Carbon Fibre
Indwangu Yesiliva yeCarbon Carbon
Indwangu ye-Faux Carbon Fibre
Indwangu ye-Acrylic fiberglass, Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized, Indwangu i-fiberglass, Acrylic Camera fiberglass,